आज तपाईको भाग्य यस्तोछः कात्तिक २२ गतेको राशिफल - Sagarmatha Online News Portal
आज तपाईको भाग्य यस्तोछः कात्तिक २२ गतेको राशिफल
आज वि.सं. २०७७ कात्तिक २२ गते शनिवार । तदनुसार इ.स. २०२० नोभेम्बर ७ तारिख । नेपाल संवत ११४० कौलागा । कार्तिक कृष्णपक्ष । सप्तमी, २६ः२९ उप्रान्त अष्टमी ।
समयमा सजग नहुँदा महत्त्वाकांक्षी योजना बिग्रन सक्छ। खानपान र भेटघाटमा अलमलिनाले चिताएका काममा बाधा हुनेछ । तापनि मिहिनेत गर्दा पछिका लागि फाइदा हुनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने साथ दिनेहरू बढ्नेछन्। विछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ । विगतका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्ने मौका छ। मिहिनेतले अध्ययनमा प्रगति गर्न सकिनेछ ।
राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् भने दिगो काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुनेछ। पदासीन व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। मिहिनेतले जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनेछ । सामाजिक नेतृत्व हातलागी हुन सक्छ । व्यापारमा पनि राम्रै फाइदा हुनेछ । प्रतिष्ठित कामले लोकप्रियता दिलाउनेछ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ ।
रोकिएका काम पुनः प्रारम्भ गर्न सकिनेछ। द्वेष तथा ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन्। आफ्ना योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला, दिगो फाइदा हुने काम गर्न सकिनेछ। पहिलेका चुनौती पार लगाउन सकिनेछ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ भने पराक्रमद्वारा अधिकार स्थापित हुनेछ । प्रतिस्पर्धामा पनि विजयी भइनेछ । केही खर्च लागे पनि यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्ने समय छ ।
परिस्थितिवश चिताएको काममा अलमल हुनेछ । आफ्नो मिहिनेतबाट अरूले फाइदा उठाउन सक्छन् । अध्ययनमा समय दिन नसकिए पनि बुद्धिको उपयोगले लाभ उठाउन सकिनेछ । समस्याका बाबजुद आंशिक फाइदा हुनेछ । नयाँ काम थाल्न केही समय प्रतीक्षा गर्नुहोला । शुभचिन्तकहरूको साथ जुट्नाले कामको वातावरण बन्नेछ । बौद्धिक क्षेत्र पनि फराकिलो बन्नेछ ।